သင်ျလိုးဂိမ်းအတူအဘယ်သူမျှမကအခြား။ ဒီအသစ်စုဆောင်းခြင်း၏ဂိမ်းသင်၏စိတ်ကိုမှုတ်တော်မူမည်ပင်အစမှအသင့်ခရီးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ။ ဒါဟာတစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုဠာလိမ့်မည်ဟုလုံးဝအရမ္းခ်စ္တယ္။ အမျိုးမျိုးကစားသမားတွေခံစားရပါလိမ့်မယ်ကြိုဆိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်သော၊ပြီးပြည့်စုံသောအစု။ တိုင်းဂိမ်းဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးအတွက်၎င်း၏အမျိုးအစား၊ဂရုတစိုက်ကောက်ယူပြီးအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီး။ အကောင်းဆုံးအရာပါပဲ၊ဒါဟာအခမဲ့ဖွင့်!
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုစုဆောင်းရရှိမည်၊သငျသညျတွေ့ဆုံရန်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးတြန္းဇာတ်ကောင်နှင့်ထိတွေ့သူတို့နှင့်အတူအတွက်အသစ်နှင့်စမတ်နည်းလမ်းများ။ ရကစားရန်သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ၊ညဦး၊Goku သို့မဟုတ်တောင်မှအလှနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သူရဲကောင်းမင်းသ Mononoke။ မူတည်ပြီးအပေါ်သင့်ရဲ့ဦးစားပေး၊သင်သည်လည်းအစုအပေါ်အခြေခံတိရစ္ဆာန်အသင်တို့၏ရှေးခယျြ၊ဒါမှမဟုတ်သင်ရောစာလုံးအတူတူသူတို့ကိုလုပ်ပြုချင်သမျှကို။ ဂိမ်းများထံမှကွဲပြားခြားနားနှိပ်ပြီးမှတ်၊သေနတ်သမား၊အဖွင့်၊နှင့်လျှော့ချ၊ကဒ်ဂိမ်းများ၊မှော်နှင့်ပင်နောက်ဆက်တွဲ။, သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအဆိပ်လိမ့်မည်ဧကန်အမှန်တွင်တွေ့ရှိဤအစုနှင့်လည်းကျော်ေစ့ေဆာ္ေနျခင္း။ ဒီမှာစိတ်ကူးတစ်ခု:အဘယ်ကြောင့်မရ Lelouch အမင်းလွှမ်းမိုးသောငှက်မျိုးသမီး၏သူရဲကောင်းများသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူမိမိအကြီးမြတ်အင်အားကြီး၏အင့္ပတ္၊သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေးရ Yagami လင်းပြင်ဆင်ကမ္ဘာတစ်ခုစကေးရတယ်သူ့နာမည်မွတ္စု?
သောသူအပေါင်းတို့သည်နှင့်ပိုပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်နှင့် redone အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများနှင့်အတူန့်အသတ်အလားအလာရှိပါတယ်အဖြစ်ဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ကြောင်းအခမဲ့နန်းစံကျော်ပုံပြင်များနှင့်ဇာတ်လမ်း၏ဇာတ်ကောင်။ စိတ်ကူးခြင်းအကြောင်းတည်းဆုံးဖြတ်အ fates အပေါင်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ(ကန့်သတ်)အပြုအမူ၏အတိုင်းအချစ်သူရဲကောင်း။ ပင်အကြမ်းအရသူတို့အဖြစ်၊သင်ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်အောင်လုပ်မအဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုအနိုင်ရတစ်ချိန်ကအဘို့အ? အ deranged နဂါးမင်း၊ပြန်ပေးဆွဲ၊မုဒိမ်းကျင့်၊sodomize ပင်ငှက်လှပတဲ့မိန်းကလေးမပါဘဲအလက်တုံ့ပြန်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များအနေဖြင့်ပုံမှန်သံသယရှိ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းလိမ့်မည်တစ်ခုတည်းသောအရာကနိုင်လိုချင်ဖြစ်နိုင်ခြေ။, ရှာလျှင်အပျော်အပါးအတွက်အရွယ်ရောက်လိုးဂိမ်းများဒီအရလဒ်တွေနှင့်အသီးအနှံအများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်သင်အစဉ်အမြဲတွေ့ကြုံရသည်။
တန်ချိန်ရှိပါတယ်အပေါ် fetishes နှင့်အလိုဆန္ဒများ၊ကစားသမားတွေအထိအလွန်အလင်းဆှအလွန်မှောင်မိုက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့သတိပြုမိကြသည်ဒီ၊ဒီနေရာတွင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အမျိုးအစားကိုမဆိုလိုးဂိမ်း။ တစ်မိသားစုလူကန်အမှန်ရှာတွေ့မိမိမိသားစုအပျော့စားစိတ်ကူးယဉ်၊သို့မဟုတ်သူ၏မှောင်စိတ်ကူးယဉ်ဝင်သင်ျ၊threesome၊လိင်တူ၊လိင်၊အချွန်၊transexual သို့မဟုတ်အကြင်သူ၏ဝိညာဉ်အလိုဆန္ဒ။ လူတွေအဲဒီမှာဂိမ်းတွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုမကြာခဏထုတ်လွှတ်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုများအတွက်-ဂိမ်းကစားဖြစ်လိမ့်မည်ပိုပြီးထိရောက်နှင့်မတ်ေတာလူတစ်ဦးနှင့်အတူသူတို့အားသူတို့ကိုပတ်ပတ်လည်။, စုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်လူကြိုက်များကြောင်းအသင်ျလိုးဂိမ်းပလက်ဖောင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုခဲ့နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်အမျိုး၊ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူစမ်းသပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဖြည့်ဆည်းရန်မိမိတို့အ။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲအင်္ဂါအပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကိုအခွင့်အများ၏ဖွဲ့စည်းနယူးကွန်နက်ရှင်နှင့်အကြားဆက်ဆံရေး။ ဒီလိုဖြစ်လာ၊အထူးသဖြင့်အပေါင်းတို့ကိုအမျိုးအစားတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ၊သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခွက်။ ထို့ကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သူကိုမျှမပြုပဲကန့်သတ်ဖို့ကိုစာသင်ပြီးသားသိအောင်၊ဒီထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ပျော်စရာ။, စိတျထဲမှာသည်းခံနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကြည့်ပါဂိမ်းအထုပ်နှင့်အတူပူးတွဲပါအဘယ်သူမျှမကြိုး၊အဘယ်သူမျှမကအနှောက်၊နှင့်မျှမတို့အစမ်းသို့မဟုတ်အစမ်းဗားရှင်း။ တိုင်းဂိမ်းအပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်လုံးဝအပြည့်အဝအဘို့အလူတိုင်းသည်။
အသင်ျလိုးဂိမ်းပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းအားဖြင့်အိမ်ဂိမ်းကစား၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ် coders ကြောင်းအမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းနှင့်ရှူရှိုက်လိုး။ အလွန်အသုံးပြုသူဖော်ရွေမှု၊နားလည်ရန်လွယ်ကူသော၊ရန်လွယ်ကူမျက်စိနှင့်အသမ်အသုံးပြုကြ၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို။ တစ်ချိန်ကသင်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရိုက်ထည့်ပါသင်ကခံစားရပါလိမ့်မယ်လက်ငင်းအမြှုပ်။ ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်လေပြီဆိုက်ပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အားလုံးပလက်ဖောင်းများထွက်ရှိပါသည်သင့်ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးအတွက်။ ဒါကြောင့်၊ဒါကြောင့်ကိစ္စမရှိပါဘူးဘယ်အစက်ကိရိယာသငျသညျကိုပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ရှိသည်မှလက်လှမ်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအလုပ်တစ်ရာရာခိုင်နှုန်း။, ကျွန်တော်လည်းသိသောကြော်ငြာများနှင့်ပေါ်လာတာတွေကိုအလွန်အနှောက်အယှက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါကျေနပ်လိင်ပျော်မွေ့၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဘယ်သူဖြစ်စေကြောင်း။ ထို့အပြင်၊သင်ကသတိထားမိမည်မဟုတ်ကြောင်းပင်လိုအပ်မှဝင်မည်သို့မဟုတ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဂိမ်းကစားလျှင်သင်ချင်ကြပါဘူး။ လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ကြ၏အများဆုံးအရေးပါပြီး၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ယူကအလွန်အလေးအနက်မှကြွလာသောအခါကာကွယ်င့်ရဲ့ဒေတာတွေကို။ အဘယ်သူမျှမအချက်အလက်စုဝေးကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ဒါကြောင့်သင်အပြည့်အဝကနေအကျိုးဖော်လျှင်သင်အလိုရှိကြသည်။
အဲသို့သော်ရွေးချယ်စရာဖန်တီးရန်အကောင့်တစ်ခုအတွက်ချွေတာ၊သတိရသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်အဝိုက္။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုပြီးနှင့်အတူအနည်းငယ်မောက်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်အခမဲ့မည်သည့်စွဲချက်။ အဘယ်သူမျှမခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်လိုအပ်သည်၊ဒါကြောင့်သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပျော်မွေ့အားလုံး၏အပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်။ နှင့်အတူဤအမှုအလုံးစုံစိတ်ထဲမှာ၊သင့်ရဲ့လှန်လှောကြည့်ရှု၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြာစုဆောင်းမည်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ရွာ။, အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်ပေါ်တွင်ရှိနေလျှင်ဖုန်း၊တက်ဘလက်၊ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မည်သည့်မျိုး၏စက်ကိရိယာ၊ဒါကြောင့်ပြတင်းပေါက်၊iOS သိုသင်ခံစားနိုင်တိုင်းလိုးဂိမ်းနှင့်စူးစမ်းမဆိုစိတ်ကူးရှိစေခြင်းငှါအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်သွားလာရင်းအပေါ်။ တစ်ဦးလည်းရှိပါတယ်ဆာက္ထားေသာရပ္ရြာ၊၏သင်တန်းအကြောင်းနှင့်သင်ကူညီလိမ့်မည်ကင်းနှင့်အတူမည်သည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အကြောင်းပလက်ဖောင်း။ နှင့်အကြောင်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ကျနော်တို့အ exterminated သူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျနှံထားသောအဖွဲ့ကစမ်းသပ်ပါတယ်။ ရပ်တန့်အချိန်ဖြုန်းနှင့်အပေါ်ရရန်ကစားရေမတွက်နိုင်သောနာရီကောင်းစွာထွင်းထုအရွယ်ရောက်လိင်အကြောင်းအခုအချိန်မှာ။ ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့၊အလွန်အမင်းဘေးကင်းလုံခြုံ၊အသုံးပြုရလွယ်ကူ။, စေတွင်းစိတ်(တြန္း)နတ်ဆိုးများနှင့်သူရဲကောင်းများတတ်ခမဲ့နှင့်မင်းရှိပါတယ်ကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမနက်ဖြန်!